ကလေးတွေအတွက် ပဟေဠိကစားခြင်းရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူး (၅)ခု - Chit MayMay
Home Child Teaching ကလေးတွေအတွက် ပဟေဠိကစားခြင်းရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူး (၅)ခု
ကစားရတာကို မကြိုက်တဲ့ ကလေး မရှိပါဘူးနော်။ puzzles (ပဟေဠိ) ကဲ့သို့သော ကလေးရဲ့စိတ်ကို လှုံ့ဆော်ပေးပြီး ကြွယ်ဝစေတဲ့ ဂိမ်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ ကလေးတွေအတွက် puzzles ကစားခြင်းရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ဖော်ပြပေးမှာပါ။ ပထမဆုံး ကစားခြင်းက ကလေးတွေအတွက် ဘာ့ကြောင့် အရေးပါသလဲဆိုတာ ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ ဂိမ်းကစားခြင်းကြောင့် ကလေးတွေဟာ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အရာတွေကို သင်ယူကြပါတယ်။
ပဟေဠိရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ- ကလေးတွေအတွက် ကစားခြင်းရဲ့ အရေးပါပုံ
ကစားခြင်းက ကလေးငယ်ငယ်လေးမှာဆိုရင် သိမြင်ခြင်း၊ ကာယပိုင်း၊ လူမှုရေးပိုင်းနဲ့ စိတ်ခံစားမှု ကျန်းမာရေးကိုတောင် အထောက်အကူပြုပါတယ်။ ကစားခြင်းက ကလေးတွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုအတွက် အရမ်းအရေးကြီးကြောင်း အမေရိကန်ကလေးအထူးကုအကယ်ဒမီက ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကစားခြင်းက
ပတ်ဝန်းကျင်၊ အခြားလူတွေနဲ့ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်စေပါတယ်
အခြေခံကျွမ်းကျင်မှုနှင့် စွမ်းရည်တွေကို သင်ကြားပေးပါတယ်
မိဘနဲ့ ကလေးတွေ အတူတူကစားတဲ့အခါ မိသားစုဆက်ဆံရေးကို တိုးတတ်စေပါတယ်
တန်ဖိုးတွေနဲ့ လူမှုရေးစံနှုန်းတွေ ရှာမှီးမှုကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ်
“ကလေးတွေအတွက် ပဟေဠိကစားခြင်းရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများ”
၁။ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် မှတ်ဉာဏ်ကို ဖွံ့ဖြိုးစေပါတယ်
ပဟေဠိတွေက ကလေးတွေရဲ့ အာရုံစိုက်နိုင်စွမ်းနဲ့ မှတ်ဉာဏ်ကို တိုးတတ်စေပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ဆက်နေတဲ့ပုံက ဘာနဲ့တူသလဲ ဆိုတာကို ဂရုစိုက်ရတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင် ကမ္ဘာကြီးကို လေ့လာပြီး သတင်းအချက်အလက်တွေကို သိမ်းဆည်းပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူတို့ဟာ အာရုံစိုက်မှုနှင့် မှတ်ဉာဏ်ကို လေ့ကျင့်ပေးပါတယ်။
၂။ သူတို့ရဲ့ ယုတ္တိစွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ်
ပဟေဠိတွေနဲ့ ကစားခြင်းဖြင့် ကလေးတွေဟာ ယုတ္တိရှိသော တွေးခေါ်မှုနဲ့ တီထွင်ကြံဆမှုကို တိုးတတ်စေပါတယ်။ ဆိုလိုတာက သူတို့ဟာ ပြဿနာတွေကို ဘယ်လိုခွဲခြားရမယ်၊ ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာကို သင်ယူစေပါတယ်။ ထို့အပြင် ပဟေဠိတွေက reason ပေးဖို့, plan ချဖို့ နှင့် အကြောင်းအရာတွေကို အဖြေရှာဖို့ ယုတ္တိရှိတဲ့အသိပညာတွေ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီကျွမ်းကျင်မှုက သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနဲ့ သင်္ချာကို ကျွမ်းကျင်ဖို့ အရေးပါပါတယ်။
၃။ အမြင်အာရုံနဲ့ spacial ဉာဏ်ရည်ကို လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်
ပဟေဠိဆိုတာက အမြင်အာရုံနဲ့ spacial ဉာဏ်ရည်ကို လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ ဂိမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက သူတို့ဟာ နေရာတွေနဲ့ ရုပ်ပုံတွေကို အမြင်အားဖြင့် ကိုယ်စားပြုဖို့ သင်ယူကြပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ကလေးတွေဟာ သုံးဖက်မြင်အရာဝတ္တုတွေကို ဘယ်လို လှည့်ရမယ်၊ ဘယ်လို စိတ်ကူးကြည့်ရမယ်ဆိုတာ သင်ယူစေပါတယ်။
၄။ self-esteem ကိုအားဖြည့်ပေးပါတယ်
ပဟေဠိတွေနဲ့ ကစားခြင်းက ရှုပ်ထွေးသော စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကို ကျော်လွှားဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကလေးတွေဟာ ရုပ်ပုံကို အပိုင်းအစများစွာမှ ပုံဖော်တဲ့အခါ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဂုဏ်ယူကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ မိမိတို့ချမှတ်ထားတဲ့ ရည်းမှန်းချက်တွေကို အောင်မြင်နိုင်ကြောင်း လေ့လာခြင်းဖြင့် self-esteem ကို တွန်းအားပေးပါတယ်။
၅။ စိတ်ပျက်မှုကို သည်းခံတတ်ဖို့ သင်ယူစေပါတယ်
ပဟေဠိတွေက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများအပြင် ကလေးတွေအား စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းကို ဘယ်လိုသည်းခံရမလဲဆိုတာကို သင်ယူစေပါတယ်။ ပဟေဠိတွေမှတဆင့် ကလေးတွေဟာ ပဟေဠိပြီးဆုံးဖို့ ကြိုးစားရင်း ပြဿနာတွေနဲ့ ကြုံကြိုက်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဟာ စိတ်ပျက်စရာတွေကို ကျော်လွှားဖို့ လိုအပ်လာပါတယ်။ ဒီနည်းအားဖြင့် ကလေးတွေဟာ သူတို့မလုပ်ခင် စဉ်းစားတတ်ဖို့၊ မိမိကိုယ်ကို ထိန်းချုပ်ဖို့ သင်ယူကြပါတယ်။
Previous articleOnlooker Play ဆိုတာ ဘာလဲ? ကလေးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုအပေါ် ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်သလဲ?
Next articleကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း အရေပြားမည်းလာခြင်းကို ဘယ်လိုကုစားမလဲ?